Maurizio Sarri” Chelsea waxaa jooga Cayaaryahan badalay Fikirkii an ka aaminsanaa Xiddiga Caalamka ugu fiican? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Maurizio Sarri” Chelsea waxaa jooga Cayaaryahan badalay Fikirkii an ka aaminsanaa Xiddiga Caalamka ugu fiican?
(17-9-2018) Macalinka cusub ee kooxda Chelsea Maurizio Sarri ayaa sheegay in uu badalay fikirkiisii ahaa Cayaaryahanka Caalamka ugu fiican kadib markii uu qabtay xilka Macalinnimo ee Naadiga Chelsea.
Maurizio Sarri” Waxaa jira Cayaaryahan badalay fikirkii aan ka aaminsanaa Cayaaryahanka Caalamka ugu fiican waana Xiddiga Eden Hazard kaas oo uu yiri isaga ayaan u aqoonsanahay in uu yahay kan ugu fiican Caalamka oo dhan.
Ninkaan u dhashay dalka Talyaaniga oo shir Jaraa id qabtay kadib kulankii ay 4-1 kaga badiyeen Cardiff City ayaa yiri waa Macquul in aan Ronaldo iyo Messi oo kaliya u aaminsanaa in ay yihiin Cayaartoyda caalamka ugu fiican balse Fikirkaas waxaa iga badalay Eden Hazard isaga ayaanan u aqoonsan doonaa kan ugu fiican kubada Cagta Caalamka oo dhan.
Eden Hazard ayaa 3 Gool u dhaliyey Chelsea Kulankii Sabtigii waxaana meesha ka baxay Warar laysla dhex marayey oo ahaa in Xiddigaan uusan haysan kalsoonida Macalin Maurizio Sarri kaas oo u amaanay si ka baxsan xadka.